Covid-19 Archives - Nawalpur Dainik
Sep102021 by Nawalpur DainikNo Comments
केवल ज्वराे आउनु मात्रै काे-राेनाकाे लक्षण हाेइन, यदि यी ३ लक्षण देखिएमा तुरुन्त लिनुहाेस् डाक्टरकाे सल्लाह ! पाचन प्रणालीलाई असर गर्ने गरी को- रोना भा-इरस संक्रमणले बिरामीको गन्धको शक्ति र मुखको स्वाद बिगार्दैछ । यद्यपि, त्यस्ता समस्या १५ प्रतिशत बिजरामीहरुमा भइरहेको छ । को- रोना भा-इरसले सबैभन्दा ‘सास फेर्ने क्षमतालाई असर गर्छ ।को- रोना बिरामी बढ्दै छ, यसको’ अन्य प्रभावहरु पनि छन् । भारतमा राज्य दून मेडिकल कलेज अस्पतालको श्वासन रोग विभागका प्रमुख तथा को- रोनाका नोडल अ-फिसर डा. अनुराग अग्रवा-लले भने कि धेरैजसो बिरामीको सामान्य लक्षण हुँदैन । उनले भने कि को- रोना बाट पी-डित बिरामीहरुमा पनि सुघ्ने शक्ति र मुखको स्वाद हराउने,पखाला लाग्ने भोक नल-गाएको गुनासो छ ।...
May82021 by Nawalpur DainikNo Comments
को’रोना संक्रमित भएका व्यक्तिले यी खानेकुराहरु खाँदै नखानूस्
काठमाण्डौं । को’रोना संक्रमण भएपछि खानेकुराहरुमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । जुन खानेकुराले हाम्रो शरीरलाई बलियो बनाउन मद्धत गर्दछ भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि कमजोर हुनबाट बचाउँछ त्यस्ता खानेकुराहरु मात्र खाने गर्नुपर्छ । को’रोना संक्रमित भएका व्यक्तिले निम्न खानेकुराहरुबाट टाढै बस्ने' प्याक गरिएको खाना कोरो’ना संक्रमित भएका व्यक्तिले प्याक गरिएको खानाबाट टाढै बस्न आवश्यक हुन्छ । यो खानेकुरा बासी हुने भएकाले यस किसिमका खानेकुरामा शरीरलाई चाहिने पोषक तत्वकोे कमी हुन्छ । प्याक गरिको खानाभन्दा बढी फाइदा ताजा पकाइएका खानेकुरामा ताजा आफूलाई मन पर्ने किसिमले पकाएर खाने बानी बसालौ । यदि आफन्तलाई कोरोना संक्रमण भई आईसोलेसनमा बसेको छ भने पनि ताजा र पोषिलो खानेकुराहरु खान दियौँ । मसालेदार खाना को’रोना लागेको व्यक्तिले धेरै मसालेदार खानाको सेवन गर्नु हुँदैन । थारै मसाला ठिक हुन्छ तर ...
Apr272021 by Nawalpur DainikNo Comments
कोरोनाको ग्राफ हरेक दिन बढिरहेको वीरगन्जमा नारायणी अस्पतालमा बेड र अक्सिजन दुवैको अभाव हुन थालेको चिकित्सकहरुको भनाइ छ । ‘बेड र अक्सिजनको अ’भाव हुँदा संक्रमितको उपचार नै प्रभावित हुन थाल्यो कसलाई भन्ने ?’ उनीहरुले गुनासो गरे । सोमबार बिहान बेडको अभाव हुँदा एउटै बेडमा ३ जनासम्म संक्रमितलाई राखेर पनि उपचार गर्नु परेको डा.नीरज सिंहले बताए । सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजमा उनले अस्पतालमा उपचार गराइरहेका संक्रमितहरुको तस्बिर राखेरै लेखेका पनि छन् ‘यो तस्बिर भारत दिल्लीको होइन, वीरगन्जकै नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्षको हो । एउटै बेडमा २/३ जना संक्रमितलाई राखेर उपचार गरिरहेका छौँ ।’नारायणीमा कोरोना संक्रमित राख्न छुट्याइएको आइसोलेन कक्ष सोमबार बिहान संक्रमितले भरिएपछि आकस्मिक उपचार कक्षमै अन्य बिरामीसँगै कोरोनाका संक्रमितलाई पनि राखेर उपचार गर्न परेको अस्पतालले जनाएको छ । ‘त्यसमा पनि...
Jan192021 by Nawalpur DainikNo Comments
COVID-19 खोपमा प्रयोग गरिएको नयाँ टेक्निक mRNA फ्लू, एचआईभी खोपको लागि अग्रसर हुन सक्छ
विज्ञहरू भन्छन कि COVID-19 खोपहरू बनाउनको लागि प्रयोग गरिएको mRNA प्रविधिले उक्त उद्योगलाई क्रान्तिमा ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। उनीहरू भन्छनन कि नयाँ प्रविधिले फ्लू र एचआईभीको खोपहरू विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। एमआरएनए टेकनीले भाइरसको हस्ताक्षर सुविधा पुन: निर्माण गरेर र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई आक्रमण गर्न सिकाएर काम गर्दछ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा वितरण भइरहेका दुई COVID-19 खोपहरूका लागि प्रयोग गरिएको एउटा उपन्यास टेक्नोलोजीले भविष्यमा भ्याक्सिन र चिकित्सा उपचारको निर्माणमा क्रान्ति गर्न सक्छ। १०० भन्दा बढी COVID-19 खोपहरू विकासमा छन् वा क्लिनिकल परीक्षणहरूमा, तर फाइजर-बायोटेक र मोडरनाका खोपहरूले साझा विकास प्रक्रिया साझा गर्छन्। प्रत्येकले एक सफलता जीन-संपादन प्रविधिको प्रयोग गर्दछ जसले मेसेन्जर आरएनए (mRNA) लाई एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रेरित गर्न परिमार्जन ...
Jan182021 by Nawalpur DainikNo Comments
COVID-१९ भ्याकेसनहरू अनुसूचीको पछाडि छन्: हामी कसरी यता फेर्न सक्छौं
विज्ञहरू भन्छन कि यो COVID-19 खोप प्रक्रिया छिटो भन्दा छिटो गर्नु महत्वपूर्ण छ। उनीहरू भन्छन कि संयुक्त राज्यले वितरण र पहुँच मुद्दाहरु समाधान गर्नुका साथै खोपका व्यक्तिलाई खोप लिन मनाउनु पर्छ। विज्ञहरूले राष्ट्रपति चुने जो बिडेनको कार्यालयमा पहिलो १०० दिनमा १० करोड डोज पुर्‍याउने लक्ष्यलाई हिट गर्ने महत्वपूर्ण लक्ष्य रहेको बताएका छन्। यो लक्ष्य हासिल गर्दा, छोटो अवधिमा, कम अस्पतालमा भर्ती हुने र मृत्यु हुने उनीहरूको भनाइ छ। उनी फेब्रुअरीदेखि नै मान्छेहरूको उपचार गर्दैछिन्, COVID-१९ सामान्यतया जिब्रो बन्द गर्न अघि। झन्डै एक वर्ष पछि, डा। एलिसा शेचेटर - पर्किन्स, आपतकालीन चिकित्सा निर्देशक र बोस्टन मेडिकल सेन्टर / बोस्टन युनिभर्सिटी स्कूल अफ मेडिसिनमा संक्रामक रोग व्यवस्थापन निर्देशक, खोपहरू हतियारमा जाँदैछन् भन्ने तथ्यले प्रोत्साहित भएको छ। "मैले यस ठाउँमा सिभिडका स...
कोरोनाभाइरस म्युटिङ्ग गर्दै छ: हामी नयाँ भेरियन्ट्सको बारेमा के जान्दछौं
COVID-19 लाई निम्त्याउने भाइरस उत्परिवर्तन भएको छ, अपेक्षानुसार। भेरियन्ट भनिने भाइरसको दुई उत्परिवर्तन स्वास्थ्य विशेषज्ञहरु चिन्ताजनक छन्। हाल कुनै प्रमाण छैन कि भेरिएन्टले भ्याक्सिनको प्रभावकारितालाई असर गर्छ वा अधिक गम्भीर बिरामीको कारण दिन्छ। केही हप्ता अघि खबर छ कि कोरोनाभाइरस, B.1.1.7 वंश को एक अधिक transmissible तनाव, यूनाइटेड किंगडम वरिपरि चक्कर लगाइरहेको छ। मौलिक तनाव भन्दा ० प्रतिशत बढी ट्रान्समिसेबल हुनसक्ने यो तनाव, युनाइटेड किंगडमलाई लकडाउनमा हाल्छ। र B.1.1.7 वंश संयुक्त राज्य अमेरिका मा धेरै स्थानहरूमा पहिले नै पत्ता लाग्यो। Jan जनवरीमा दक्षिण अफ्रिकी स्वास्थ्य अधिकारीहरूले घोषणा गरे कि उनीहरूले पनि नयाँ फेला पारेको छ। यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन कि कोरोनाभाइरस उत्परिवर्तन भएको छ - यो नै भाइरसले गर्छ। अधिकतर म्युटेसन बेकारका हुन्छन्, तर प्राय जसो, ए...
Jan172021 by Nawalpur DainikNo Comments
Milder COVID-19 प्रकरणहरु संग सम्बन्धित गन्धको नुकसान
COVID-19 भएका लगभग 86 प्रतिशत मानिसहरूले गन्ध लिनको लागि केहि वा सबै आफ्नो क्षमता गुमाउँछन्। तर अधिकांश अनुसन्धानले गन्धको बोध हराउने अधिकांशले यस रोगको हल्का रूपको अनुभव गरे। अन्वेषकहरू विचार गर्दछन् कि हल्का बिरामी भएका बिरामीहरूको केहि एन्टिबडीहरू उच्च स्तरमा हुन सक्छन् जसले COVID-19 लाई नाकमा फैलिनबाट सीमित गर्दछ। गन्धको घाटा केही COVID-19 केसहरूको लक्षण लक्षण भएको छ। अब विशेषज्ञहरूले यो लक्षणलाई कसरी प्रकट गर्न सक्दछ कि कुनै व्यक्तिमा गम्भीर केसको सम्भावना छ कि छैन भनेर सिक्दैछ। COVID-19 भएका लगभग 86 प्रतिशत मानिसहरूले गन्ध लिनको लागि केहि वा सबै आफ्नो क्षमता गुमाउँछन्। तर यस गन्धमा प्रकाशित गरिएको नयाँ अनुसन्धानले भने, अधिकांशले गन्धको भावना हराए (लगभग 55 प्रतिशत) को रोगको हल्का रूप थियो। अन्वेषकहरू भन्छन कि यसको कारण राम्ररी बुझ्न सकेको छैन। तर तिनीहरू सोच्छन्...
पोषणविद्हरूले किन उनीहरूको सूचीको शीर्षमा भूमध्यसागर, DASH आहार राख्छन्
भूमध्यसागर र DASH डाइट फेरि एक पटक उत्तम आहारहरूको वार्षिक सूचीको शीर्षमा छन्। न्यूट्रिशनिस्टहरू यसो भन्छन् कि उनीहरूसँग सब भन्दा राम्रो जग छ र पछ्याउन सजिलो मध्ये एक हो। तिनीहरू स्वास्थ्यकर खाने कोशिस गर्दै मानिसहरूलाई उनीहरूको मनपर्ने आहारको साथ लचिलो हुन सल्लाह दिन्छन् र एकैचोटि धेरै चीजहरू परिवर्तन नगर्ने प्रयास गर्दछन्। भूमध्य आहार लगातार चौथो वर्षको लागि सबै भन्दा राम्रो समग्र आहारमा पहिलो स्थानमा गरिएको छ DASH आहार नजिकै दोस्रो आउँदैछ। त्यो अमेरिकी समाचार र वर्ल्ड रिपोर्टको वार्षिक सूची अनुसार छ। पोषण विशेषज्ञहरूका लागि यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। “यी आहारहरूलाई यति उच्च स्थान दिइन्छ किनभने तिनीहरूसँग पछाडि धेरै डाटा मात्र हुँदैन, तर डाटा कडा छ,” क्रिस्टिन किर्कपाट्रिक, एमएस, आरडीएन, “स्कीनी लिभर” का लेखक हेल्थलाइनलाई बताउँछिन्। "तिनीहरू दुबै राम्रा अनुस...